Jamaahiirta Real Madrid Oo War Farxad Leh Helay Xilli Mid Kamid Ah Xiddigaha Ugu Muhiimsan | Dunida Ciyaaraha
Jamaahiirta Real Madrid Oo War Farxad Leh Helay Xilli Mid Kamid Ah Xiddigaha Ugu Muhiimsan
Jamaahiirta kooxda Real Madrid ayaa war farxad leh ka helaya xerada tababarka kooxda kaddib markii uu maanta si rasmi ah tababarka uga soo muuqday Toni Kroos oo mudooyinkii ugu dambeeyay sababo dhaawac garoomada uga maqnaa.
Kaddib markii uu saddexdii kulan ee ugu dambeeyay ee kooxdiisa gabi ahaanba seegay, Kroos ayaa kusii dhawaanaya soo laabasho iyo inuu kasoo kabto dhaawacii uu jilibka ka qabay.
Xiddiga ree Germany ayaa ka qayb qaatay tababarkii maanta oo Isniin ah waxaana uu intaa kaddib sameeyay tababaro gaar ah oo uu taam ahaanshihiisa ku taageerayo, Si lamid ah Mariano oo dhaawac yari soo gaadhay toddobaadkii hore.
Kroos ayaa soo laabashadiisa samayn kara kulanka toddobaadkan ee CSKA Moscow ee Champions League walow ay u badantahay inaan kulankaas lagula deg degi doonin oo loo dhigi doono kulanka La Liga ee
Rayo Vallecano maalmo kahor Koobka Kooxaha Aduunka.
Xiddigaha kala ah Casemiro, Sergio Reguilon iyo Nacho ayaa sidoo kale dhammaantood kasoo muuqday tababarka iyaga oo sii wada kasoo kabashada dhaawacyadii ay la dhibtoonayeen.
Ugu dambayn, Xiddigii ka qayb qaatay kulankii Huesca ayaa intooda badani qaateen tababaro yar oo soo kabasho ah walow xiddigaha Sergio Ramos, Alvaro Odriozola, Raphael Varane, Lucas Vazquez, Dani Ceballos iyo Marcos Llorente ay sameeyeen orod.